Microsoft iyo "guulaheeda taariikhiga ah" ee teknolojiyadda aqoonsiga hadalka | Wararka IPhone
Microsoft iyo "guulaheeda taariikhiga ah" ee teknolojiyadda aqoonsiga hadalka
Baarayaasha Microsoft ayaa ka warbixiyay taas waxay abuureen teknolojiyad cusub oo lagu aqoonsan karo hadalka oo isu beddelaysa hadallo isku mid ah, sida aadamuhu yeelo oo kale. Qiyaasta qaladka nidaamka ee eraygii ayaa lagu soo warramey inuu yahay 5,9 boqolkiiba., oo qiyaas ahaan la mid ah xirfadleyda qorista qoraalka ee laga codsaday inay ka shaqeeyaan isla duubitaannada, sida ay sheegtay Microsoft.
"Waxaan gaarnay sinaanta aadanaha," ayuu yiri saynisyahan Xuedong Huang, oo ku bixiyay macluumaadka ugu muhiimsan warbixintiisa. isagoo ugu yeeray talaabadan 'guul taariikhi ah'.
Si loo gaaro tilaabada, kooxdu waxay adeegsadeen shabakad kumbuyuutar iyo aaladda qalabka Microsoft, iyo sidoo kale nidaam waxbarasho oo qotodheer oo guri-kooxeed ah oo kooxda cilmi-baarista ay ka heleen GitHub iyada oo loo marayo ruqsad il furan Nidaamku wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyada shabakadda neerfaha ee kooxaha ereyada la midka ah, u oggolaanaya moodellada inay si hufan ugu shaqeeyaan erey-bixin.
Shabakadaha neerfaha waxay ku saleysan yihiin xog fara badan oo loo yaqaan "xogta tababarka". waxaana loo aasaasay inay baraan kumbuyuutarrada wax lagu qoro si ay u aqoonsadaan qaababka isku dhafan ee dhawaaqyada. Microsoft waxay qorsheyneysaa inay tikniyoolajiyadda ku isticmaasho Cortana, kaaliyahaaga codka shaqsiyeed ee Windows iyo Xbox One, iyo sidoo kale barnaamijka qoraalka-qoraalka qoraalka.
Laakiin teknolojiyaddu wali waddo dheer ayaa harsan Kahor intaanay socodsiinin macnaha ugu muhiimsan (macnaha ereyada) iyo aqoonta duruufaha, astaamaha muhiimka ah ee isticmaalka luqadda maalinlaha ah ee ubaahan inay qabtaan kaaliyeyaasha shaqsiyadeed, sida Siri, si ay uga baaraandegaan codsiyada uguna dhaqmaan si waxtar leh.
Harry Shum oo madax ka ah kooxda cilmi baarista AI ee Microsoft ayaa yiri "Waxaan ka guureynaa duni ay tahay inay dadku fahmaan kombuyuutarrada adduunka halka kumbuyuutarraduna aysan wali na fahmin". Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa waqti dheer ka hor intaan kumbuyuutarradu fahmin macnaha dhabta ah ee waxa la sheegayo, ayuu ka digay. "Sirdoonka dhabta ah ee macmalka ah wali wuxuu ku socdaalaa meel fog".
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Microsoft iyo "guulaheeda taariikhiga ah" ee teknolojiyadda aqoonsiga hadalka
Waxaan u maleynayaa inay tahay tallaabo aad u weyn, maalinta aan la macaamili karno aaladaha iyadoo aan la adeegsan aaladaha durugsan waxay gebi ahaanba beddeli doontaa habka loo fahmo xiriirka nin ee mashiinnada.
Night Sky 4, oo ku daawanaya xiddigaha barnaamijka toddobaadka
IPhone 7, bil kadib: khibrad isticmaale [fiidiyow]